Zip Isixhobo sokulungisa. Ukulungisa Zip Ifayile. Zip Lungisa isoftware.
DataNumen Zip Repair Ingaba i eyona Zip isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Inokulungisa urhwaphilizo Zip iifayile kwaye uphinde ufumane idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela unciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,635)
Ngoba DataNumen Zip Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo ye zip imveliso kwakhona. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Zip Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo, kubandakanya u-WinRAR kunye nezinye zip izixhobo zokulungisa, emarikeni!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Zip Repair utshaya ukhuphiswano
Ndizama ukuvula indawo yokugcina eneefoto ezindala, kodwa andikwazanga, ngenxa yempazamo ethile. Ndaye ndasebenzisa DataNumen Zip Repair kwaye yenza umlingo.
Ndizama ukuvula indawo yokugcina eneefoto ezindala, kodwa andikwazanga, ngenxa yempazamo ethile. Ndaye ndasebenzisa DataNumen Zip Repair kwaye yenza umlingo. Ndiyavuya ukuba ndazifumana iifoto zam. Enkosi ngemveliso yakho!
Ndiyabonga ngenxa yakho zipukulungisa. Yayisisoftware elungileyo ukulungisa yam zip ifayile.
Inkqubo enkulu yokubuyisela ZIP oovimba. Ndicebisa ... kwaye kulula njengomnyango.
UMarketer odla umhlala-phantsi
Oktobha 27, 2019
DZIPU-R wenze imimangaliso kwaye wafumana amakhulu e-MB eefoto zedijithali endicinga ukuba ndiza kuba lost ngonaphakade.
Ulungiswe uLote-uMgcini woBomi!
Ukufunyanwa nje malunga ne-1GB yeefoto ukusuka Zip iifayile. Ndicinga ukuba bendizele ngenene kodwa uDZIPR ndilima nje ngeqashiso
Ukufunyanwa nje malunga ne-1GB yeefoto ukusuka Zip iifayile. Ndicinga ukuba bendizele ngenene kodwa uDZIPR kulinywe nje ngeqashiso kwimowudi yebatch. Andilahlekanga nefoto enye. Ilula kakhulu kwaye iyakhawuleza ukusebenzisa, nayo. Awunakuyicebisa ngokwaneleyo.
Ndixhase iifayile ezithile kwi Zip ifayile kwincwadi yam yamanqaku yeMac G4. Andinakukhetha ngaphandle kokubabuyisela kwi-PC, kwaye xa ndizama ukukhuphazip, Ndiyifumene
Ndixhase iifayile ezithile kwi Zip ifayile kwincwadi yam yamanqaku yeMac G4. Andinakukhetha ngaphandle kokubabuyisela kwi-PC, kwaye xa ndizama ukukhuphazip, Ndifumanise ukuba akukho nto inokuvula i-10.2 GB yogcino. Ngaphandle kwe-skeptisim, ndikhuphele uDZIPR, ndafumanisa ukuba inokulungisa ifayile yam, ndiye ndaya phambili ndayalela ukuba ndisuse umda kuhlobo lwetyala. Ndabaleka kwakhona, kwaye ngelixa yayilungiswa, ayifumananga kuphela idatha, yayifumana YONKE! Ndonwabile ukuba iNkxaso yeTekhnoloji iphendule ii-imeyile zam ngokukhawuleza, kwaye ziluncedo olukhulu (ukutshintsha uluvo lwam ngokubanzi ngenkxaso yesoftware) Ndiyabulela ngokwenza into eluncedo. Ngaba zikhona izicwangciso zenguqulo ye-OS X ngalo naliphi na ixesha kungekudala?
UBenjamin James Chapman
Emva kokulungiswa kwebhetshi, zonke iifayile zilungiswe ngempumelelo kwaye zikhupha kwi-mac yam ngeewindows PKZip kunye neMephu yeNethiwekhi ye-SaMBa. Mna
Emva kokulungiswa kwebhetshi, zonke iifayile zilungiswe ngempumelelo kwaye zikhupha kwi-mac yam ngeewindows PKZip kunye nemephu yenethiwekhi ye-SaMBa. Ndimele ndigxininise ukuba ndonwabile kakhulu ukuba imveliso yakho isebenza kakuhle, kwaye inkxaso ibimnandi kakhulu
Ngokuzithoba, kwaye enkosi kwakhona
Imveliso ebalaseleyo !! Ndandithandabuza kodwa sele ifumene i-backup zip yogcino lwam lwe-imeyile kwaye ndiguqukile :)
Enkosi kakhulu kwaye
Imibulelo emininzi kunye neminqweno emihle
Isebenza kakuhle. undigcinele iimfumba zexesha kunokuba ukhuphele ifayile kumthombo owahlukileyo kuba ifayile yonakele, le nkqubo iyayilungisa. A
Isebenza kakuhle. undigcinele iimfumba zexesha kunokuba ukhuphele ifayile kumthombo owahlukileyo kuba ifayile yonakele, le nkqubo iyayilungisa. Inkqubo eqaqambe kakhulu !!!!!!!! *****
Ndakhangela indawo post indumiso kodwa akafumananga nto. Ndiyathanda ukunceda abanye abangena engxakini ngenkohlakalo zip ifayile. bendi
Ndakhangela indawo post indumiso kodwa akafumananga nto. Ndiyathanda ukunceda abanye abangena engxakini ngenkohlakalo zip ifayile. Ndisebenza kwi-PC ukusukela ngo-1982, ngaphambi kwe-IBM okanye iMicrosoft kwaye le yinkqubo yokuqala esebenza ngokukhawuleza, ngokulula nangempumelelo.
Andizange ndibenayo zip inkqubo yokulungisa esebenzayo.
Ndinemidlalo emininzi, kunye nezinye iintlobo zeefayile ezonakalisiweyo, kwaye ngaphambi kokuba ndiyifumane le nkqubo, ibimosha ikhompyuter yam, le yenye yazo
Ndinemidlalo emininzi, kunye nezinye iintlobo zeefayile ezonakalisiweyo, kwaye ngaphambi kokuba ndiyifumane le nkqubo, ibimosha ikhompyuter yam, le yenye yeenkqubo ezilungileyo endizisebenzisileyo, ndizokuphinda ndiyinike abahlobo.
Oku kusebenze ngokugqibeleleyo! Enkosi kakhulu! Ulisindisile iqela lam
ukubuyela ukwenza iinyanga ezili-16 zomsebenzi kwakhona. DZIPR bekufanelekile
$ 30 mna
Ndisebenzise i- $ 30!
Ndizamile iimveliso ezininzi kwimfuno yam yokufumana kwakhona Zip ifayile ebinonyaka opheleleyo wogcino lwe-imeyile kodwa ezingaphumelelanga, kude kube ngoku. Mna
Ndizamile iimveliso ezininzi kwimfuno yam yokufumana kwakhona Zip ifayile ebinonyaka opheleleyo wogcino lwe-imeyile kodwa ezingaphumelelanga, kude kube ngoku. Ndikhuphele uguqulelo lwedemo lukaDZIPR kwaye ndakhuthazwa yingxelo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ke ndatyala imali encinci kwaye ndikhuphele ingxelo epheleleyo.
Ndothukile, imveliso epheleleyo isilele ukubuyisa ifayile yam ngenxa yoko ndanxibelelana nenkxaso @ yokulungisa-zip-ifayile.com. Inkxaso ye-Tech reps icele iimpazamo kwi-DZIPR nasemva kokuphononongwa ngononophelo, wandicebisa ngenkqubo yokuba ndizame. Isebenzile!
Le mveliso kunye nenkxaso yezobuchwephesha yenkampani igcine iirekhodi ezibalulekileyo ebendicinga ukuba ziyi-lost ukwenzela okuhle. Enkosi!
I-3GB yeefoto igcinwe nje! Ukuthweswa isidanga ekholejini kunye neefoto zentombi zigciniwe! Enkosi.
Ingcebiso ngembonakalo: Ukukwazi ukudwelisa
Ingcebiso ngembonakalo: Ngaba uyakwazi ukudwelisa ukuba zeziphi iifayile ezingagcinwanga?
Uxwebhu lwe-OpenOffice olulungisiweyo lusebenza njengekhubalo! Ubhontsi omkhulu ka-DZIPR!
Le mveliso intle! Usigcinele ixesha elininzi. Nxibelelana nathi ngezinye iinkonzo onokuba nazo.
UPaul M. Dreskin
Ukulungiswa kokubi kwam Zip ifayile, njengoko kuthenjisiwe.
Khange ndikholelwe ukuba izakusebenza, kodwa iyasebenza, imbi kakhulu ayinakulungisa i-ACE kwaye RAR iifayile ngokunjalo.
Ndizamile ngefayile enye eyonakeleyo evela kwifloppy kwaye yandisebenzela. Ziifayile ezi-5 kuphela kwezingama-40 ezonakalisiweyo kwinqanaba elithile.
Ukubuyisa konke ukonakala kwam *.zip iifayile. Ingxaki kuphela yayikukuba nengxaki nge *.zip iifayile ezazenziwe zipInyawo. Ngaphandle koko 10 ngaphandle
Ukubuyisa konke ukonakala kwam *.zip iifayile. Ingxaki kuphela yayikukuba nengxaki nge *.zip iifayile ezazenziwe zipInyawo. Ngaphandle koko i-10 kwi-10!
Enkosi kakhulu nge-imeyile yakho ekhawulezileyo.
Ndizamile oku kwaye yonke into ibisebenza ngathi liphupha!
Enkosi kakhulu, ndakwazi ukufumana ngaphezulu kwe-900 MB!
Ndinemveliso epheleleyo, iyandinceda ukulungisa ifayile ye-300MB
UFeliksi A Legere
WOWU! Undigcinele ixesha leeyure ezi-2 kunye nohambo lokuya nokubuya kuyo yonke idolophu Enkosi!
Kuyahlaziya ukubona inkqubo elula eluncedo ngaphandle
Kuyahlaziya ukubona inkqubo elula eluncedo ngaphandle esebenza ngokwenene! Ndizamile ngephanyazo ndingacingi ukuba izakusebenza. DZIPR wandivuthela!
"INDLELA YOKULUNGISA INDLELA YOKULUNGISA IINKCUKACHA ZE-CRC: D"
Most yexesha elicace gca ukuba ukhuphele zip file kwaye inempazamo ye-crc, ngakumbi ukuba zip ifayili
Most yexesha elicace gca ukuba ukhuphele zip file kwaye inempazamo ye-crc, ngakumbi ukuba zip Ifayile kuphela iqulethe ifayile ye-ISO. Le mveliso ilungise impazamo yeCRC kwifayile yam zip ifayile kwaye wandivumela ukuba ndikhuphe ifayile ye-ISO ngaphandle kweziphene!
Ngaba yinkqubo elungileyo ngokwenene, yokuba abantu abakhuphele iifayile ezinkulu ze-sfx kwi-intanethi eziyingozi ndincoma le software! yiyo
Ngaba yinkqubo elungileyo ngokwenene, yokuba abantu abakhuphele iifayile ezinkulu ze-sfx kwi-intanethi eziyingozi ndincoma le software! iyalungisa zip iifayile kunye neefayile ze-sfx zilungile! kodwa ndicinga ukuba le software ifuna ukukwazi ukulungisa rar iifayile nazo :(
Ngokuqinisekileyo! Unokusebenzisa icandelo elichazwe kwiwebhusayithi yakho okanye naluphi na uncwadi lokwazisa. Ndenzele inceba kwaye uhlele ireferensi yeCRC, ukusukela CRC kunye
Ngokuqinisekileyo! Unokusebenzisa icandelo elichazwe kwiwebhusayithi yakho okanye naluphi na uncwadi lokwazisa. Ndenzele inceba kwaye uhlele ireferensi yeCRC, kuba iCRC kunye necyclic Redundancy ziyimpazamo efanayo. Ukuba ufuna indumiso engakumbi, namhlanje, ndifumene uhlaziyo nge-imeyile ngesixhobo se-shareware esinefayile ye- CAB ifayile kwi Zipifayile. Ewe, Phumelelazip, IPKZip & WinAce konke kuxeliwe ukuba ifayile ibonakele kwaye ayinakuvulwa. Ndiyigijimisile ngo-DZIPR kwaye ayenzanga kuphela zipifayile iyalungiswa, kodwa ibiyelwe CAB ifayile yayiyindlela eyiyo ye-byte yomdlalo we-byte cabifayile endiyifunayo kuhlaziyo. Kubonakala ngathi le D incinciZIPR Gem yinto iMicrosoft ekufuneka ilayisensi. Enkosi kwakhona,
EMantla Carolina, e-USA
Uya kufumana ivoti yam yeyona nto iluncedo kwi-PC. Oko ndathenga uDZIPR, ndiyisebenzise kaninzi kwiifayile ezazibonisa i-CRC embi okanye enye
Uya kufumana ivoti yam yeyona nto iluncedo kwi-PC. Oko ndathenga uDZIPR, ndiyisebenzise kaninzi kwiifayile ezazibonisa i-CRC embi okanye zinezinye iingxaki ezibangele u-Winzip okanye iWinAce ukuvala kwaye uyeke ukuqhubekeka. DZIPR uyilungisile yonke into endiyiphose kuyo. Esinjani isiqwenga esimangalisayo nesintle sobunjineli besoftware.
Ndingathanda ukukubulela. Ndithengile DataNumen Zip Repair ngaphantsi ko
iiyure ezimbini ezidlulileyo kwaye zisebenza ngokugqibeleleyo !!! Amava am anokushwankathelwa
UWUSINDISILE UMSEBENZI WAM!
Inkonzo yeKhompyutha yeArdor
Ndikhuphela inkqubo epheleleyo kwakhona kunye nayo yonke idatha yokulungisa endiyithumela kwicomp yam. Ngale ndlela inkqubo isebenza kakuhle kwaye ilungisa i-91% yediski yam !!!
Ndigcinile i-almost, yonke idatha yam ebalulekileyo !!!
Enkosi ngenkqubo DZIPR! Isebenza kakuhle kakhulu!
Isebenze kakuhle. Enkosi ngoncedo lwakho.
Mholweni. Ndithengile inkqubo yakho, kwaye yalungisa into ebalulekileyo ZIP ifayile. Enkosi.
Enkosi ngoncedo lwakho. Ndonwabe kakhulu ngu-DZIPR.
Ukujongana neMifanekiso yokuFota
Ndine-800 MB zipifayile enama-97,00 eyenziweyo eSolaris efumene impazamo kwi "central dir" yayo. Nje ukuba oku kwenzekile, andikwazi ukufikelela ngaphezulu kwe-
Ndine-800 MB zipifayile enama-97,00 eyenziweyo eSolaris efumene impazamo kwi "central dir" yayo. Nje ukuba oku kwenzekile, andikwazi ukufikelela ngaphezulu kweyokuqala ~ 30,000, kunye nomgangatho ziplungisa izixhobo eziza njengenxalenye ye-pkzipc kunye no-WinZip Ngaba _nothing_ ukunceda.
Oku bekukhathaza ngakumbi kuba bendisazi most okanye zonke iifayile zazisekho apho - yayiyimpazamo nje kwindawo yogcino "tafile yemixholo".
ndidla ngoku DatanumenNguDZIPR ukubuyisa i-98% yeefayile kwindawo yogcino! Ndonwabile ukufumana inkampani enje Datanumen ngokwazi indlela yokukhupha izinto ezilungileyo kwindawo yogcino, ngakumbi xa eyona ngcola ingcolileyo.
Isoftware yeCleanscape yamanye amazwe
IAlbuquerque, iNM, e-USA
Oku kusebenze ngokugqibeleleyo. Enkosi!
UFredericton, eNew Brunswick
Ndifumene isixhobo sakho ngelixa ndisebenzisa iwebhusayithi http://rmse.awardspace.com kwaye ndingathanda ukuthi isixhobo sakho sihle kakhulu ngeempawu ezininzi.
Ndifumene isixhobo sakho ngelixa ndisebenzisa iwebhusayithi http://rmse.awardspace.com kwaye ndingathanda ukuthi isixhobo sakho sihle kakhulu ngeempawu ezininzi. Umsebenzi oGqwesileyo. Ukuba unoluhlu lweposi okanye ileta yeendaba nceda ubhalise. Malunga, JA
Ungaze ukhathalele, IYASEBENZA! NDONWABILE SOOO! Enkosi kakhulu ngalo lonke uncedo lwakho! Ndonelisekile ngoku ngama-100% kwaye ndiza kuyeka ukukukhathaza. indlela yokubonisa ukuhleka. ENKOSI
Ungaze ukhathalele, IYASEBENZA! NDONWABILE SOOO! Enkosi kakhulu ngalo lonke uncedo lwakho! Ndonelisekile ngoku ngama-100% kwaye ndiza kuyeka ukukukhathaza. indlela yokubonisa ukuhleka. ENKOSI KWAKHONA!
Enkosi kwakhona ngalo lonke uncedo olunikileyo, kwaye ndiza kuyicebisa le mveliso kuye nabani na onengxaki efanayo!
Kwaye, MN, e-USA
Ndikhuphe ngempumelelo idatha.
Ndacinga ukuba kuya kufuneka ndincame yonke idatha ...
Ndiyayixabisa kakhulu eyakho
Ndiyaluxabisa kakhulu uncedo lwakho, enkosi kwakhona.
UFunabashi-shi, uChiba, eJapan
Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo kunye necacileyo. Isisombululo sakho sisebenzile! Isoftware enkulu yokuSasaza ifayile isebenza, emva koko yaqhubela phambili Zip
Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo kunye necacileyo. Isisombululo sakho sisebenzile! Isoftware enkulu yoSasazo lweFayile isebenza, emva koko Advanced Zip Repair Ukufumana kwakhona zonke iifayile!
Ngoku ndoneliseka kakhulu ngumthengi, kwaye ndiyavuya ukuqhubeka nokusebenzisa imveliso. Enkosi kwakhona, kwaye ube nosuku olugqibeleleyo.
ILakeland, FL, e-USA
Besine-Gigabyte engama-60 zip ifayile engavuleki. Advanced Zip Repair ayinakulungiswa njengoko yayinkulu kakhulu. Nangona kunjalo, DataNumen undibonelele nge
Besine-Gigabyte engama-60 zip ifayile engavuleki. Advanced Zip Repair ayinakulungiswa njengoko yayinkulu kakhulu. Nangona kunjalo, DataNumen undinike esinye isiqwenga sesoftware whcih esahlulahlula iifayile kwiifayile ze-1 zeGigabyte ezilawulekayo, emva koko Advanced Zip Repair zilungiswe ngempumelelo nganye nganye. Sizamile iindidi zezinye iimveliso zokulungisa ngaphandle kwempumelelo, ke ngokuqinisekileyo ndiza kubuyela kuzo DataNumen ukuba sinezinye iingxaki zedatha kwixa elizayo. Iimveliso ezixabisekileyo kunye nenkxaso enkulu!
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Zip Repair v3.5
Unokulungisa zonke iintlobo ezingaphantsi ze Zip iifayile kunye nazo zonke iintlobo zeefayile zokuzikhupha.
Jonga ukuthembeka kwedatha kwaye ulungise amaxabiso e-CRC angalunganga kwindawo yogcino.
Inkxaso yokulungisa Zip iifayile kunye Zip Izinto zefayile ezinkulu kune-4GB.
Inkxaso yokulungisa yandiswa Zip iifayile, zahlulwe Zip iifayile kunye ne-encrypted Zip iifayile.
Inkxaso yokulungisa Zip iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yeefayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye Zip iifayile eziza kulungiswa kwikhompyuter yomthengi.
Inkxaso yokukhupha izinto ezifumanekileyo kulungiso Zip okanye ugcino lweSFX.
Idityaniswe neqokobhe leWindows, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile kunye nomxholo (cofa ekunene) kwimenyu yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen Zip Repair Ukufumana kwakhona ukonakala Zip Archives
Xa akho zip iifayile zonakalisiwe okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen Zip Repair ukuskena ifayile ye zip iifayile kwaye ufumane kwakhona idatha eninzi kubo.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala zip Iifayile nge DataNumen Zip Repair, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- zip iifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo zip ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igalelo zip igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana zip ifayile izakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen Zip Repair uza kuyilungisa zip fayile kwaye ukhuphe zonke izinto kuyo kulawulo olubizwa ngokuba yi-xxxx_recovered, apho i-xxxx ligama lomthombo zip ifayile. Umzekelo, kumthombo zip ifayile yonakele.zip, isikhombisi esivelisayo sokukhuphela siya konakaliswa-kufunyanwa. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lesikhombisi ngqo okanye ucofe i ukukhangela kwaye ukhethe ulawulo lwemveliso.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Zip Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi zip ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo zip ifayile inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku unokuvula umkhombandlela wokuphuma kunye nokufikelela kwizinto ezikwi- Zip ifayile.
DataNumen Zip Repair 3.5 ikhutshwa ngoMeyi 4, 2021
DataNumen Zip Repair 3.2 ikhutshwa nge-19 kaDisemba, 2020
DataNumen Zip Repair 3.0 ikhutshwa nge-30 ka-Okthobha ka-2020
DataNumen Zip Repair 2.9 ikhutshwa nge-5 kaMeyi ka-2020
Inkxaso yokubonisa ilog kumanqanaba ahlukeneyo.
DataNumen Zip Repair 2.8 ikhutshwa nge-22 ka-Epreli 2020
Ukuphucula izinga lokubuyisela izinto ezifihliweyo.
DataNumen Zip Repair 2.7 ikhutshwa nge-21 ka-Okthobha ka-2019
Ukuphucula izinga lokufumana kwakhona izinto ezinenkohliso.
DataNumen Zip Repair 2.6 ikhutshwa nge-20 ka-Agasti ka-2019
DataNumen Zip Repair 2.5 ikhutshwa nge-7 kaNovemba ngo-2018
DataNumen Zip Repair 2.3 ikhutshwa nge-10 ka-Epreli 2018
Ukukhupha ngokuzenzekelayo izinto eziye zafunyanwa kwi Zip yogcino.
DataNumen Zip Repair 2.2 ikhutshwa nge-21 Septemba 2013
DataNumen Zip Repair 2.1 ikhutshwa ngoJulayi 21, 2013
Ukuphucula inkxaso kwiifayile ezinkulu.
DataNumen Zip Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Novemba 23, 2012
Phinda ubhale yonke injini yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
inkxaso Zip ifayile kunye Zip into enkulu kune-4GB.
DataNumen Zip Repair 1.8 ikhutshwa nge-25 ka-Okthobha ka-2006
Ukuphucula inkxaso ekunatyisweni / ekwahlulweni zip iifayile.
Gcina indawo yokugcina idatha, kubandakanya izixhobo zokubuyisa ukonakala Zip kunye noovimba be-SFX, RAR oovimba, Unix TAR oovimba, kunye neMicrosoft CAB oovimba.
Ukulungisa kwaye ufumane kwakhona ukonakala CAB oovimba.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona i-Unix eyonakeleyo TAR oovimba.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona iMicrosoft backup (BKFiifayile).